» आफ्नै अस्पतालको लापरबाहीले डाक्टरको मृत्यु
काठमाडौं। भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका डा. ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंहको उपचारमा लापरबाही र त्रुटि गरेको भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका एक चिकित्कसलाई कारबाही गरेको छ भने एक जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा १० वर्षदेखि अर्थोपेडिक्स सर्जन एवं अर्थोपेडिक्स विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत डा।. ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंहको घाँटीमा १० भदौ ०७६ मा खाना खाने क्रममा हड्डी अड्किएको थियो ।
त्यसपछि डा. सिंहलाई उपचारका लागि उनैले काम गर्ने युनिभर्सल अस्पताल लगियो । ११ भदौमा घाँटीबाट हड्डी झिकिएको भनेर उपचारमा संलग्न चिकित्सकले डा। सिंहको परिवारलाई जानकारी दिएका थिए ।
डा। सिंहको उपचार सफल भएको भन्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सकले सामाजिक सञ्जालमा उपचार गरिरहेको तस्बिर र भिडियो नै सार्वजनिक गरे । ‘आधा हड्डी झिक्यौं, आधा धकेलेर पेटमा पुयायौं भनेका थिए,’ डा। सिंहका छोरा प्रज्ज्वल सिंहले भने । त्यसको पाँचौं दिन उनलाई बान्ता हुन थाल्यो, ज्वरो आयो ।
कलेज व्यवस्थापनले भने क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताएको छ । उनको उपचारमा सक्दो सहयोग गरेको दाबी गर्दै कलेजका म्यानेजिङ डाइरेक्टर खुमा अर्यालले भने, ‘अस्पतालले बिरामीलाई सेवा–सुविधा दिने हो, क्षतिपूर्ति दिने होइन । उपचार डाक्टरले गर्छन्, अस्पतालले गर्दैन, त्यसैले हामी क्षतिपूर्ति दिन सक्दैनौं । क्षतिपूर्ति दिन अस्पताल खोल्या त होइन नि ।’ क्षतिपूर्ति चाहिएमा कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट